Uzijonga njani iZithuba zam ze-Instagram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyibona njani imiyalezo yam ye-Instagram?
Epreli 26, 2021 0 IiCententarios 422
Amaxesha amaninzi sizifumana sixakekile ukusebenza kwiiPC zethu kwaye asinalo ixesha lokujonga iselfowuni yethu kwaye ngokungachanekanga siphoswe imiyalezo ebalulekileyo esiyifumana kwiinethiwekhi zethu zentlalo, kwimeko ye-Instagram, ayisiyiyo imeko kule meko.
Kule meko sineendaba ezimnandi kuwe, ukhetho lokujonga kwakhona okanye ukufikelela kwimiyalezo yethu yabucala I-Instagram evela kwi-PC yethu. Apha siza kuchaza ukuba ungayenza njani.
Kwimeko ye-Instagram zimbini ezinye iindlela apho unokufikelela khona imiyalezo yakho ethe ngqo.
Inketho ye-Intanethi ye-Instagram DM:
Into yokuqala ekufuneka uyenzile fikelela kwiakhawunti yakho I-Instagram, ngendlela eqhelekileyo, oko kukuthi, ngegama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha.
Uya kuba nenketho yokungena kwiakhawunti yakho Facebook okanye inombolo yakho yefowuni ephathekayo.
Kwimeko apho unenyathelo lokuqinisekisa elinamanyathelo amabini alungiselelwe ukufikelela kwiakhawunti yakho Instagram, Uya kudinga ukufaka ikhowudi yokufikelela. Ngexesha isicelo sisicela.
Kuya kufuneka ubeke kwaye ukhethe into ehambelana necandelo le- iingxoxo, Oku kubekwe kwicala lasekhohlo, kanye ngezantsi "ngqo".
Khumbula ukuba unako qhubeka nayiphi na incoko yezo ububambe kwifowuni yakho ephathekayo, njengoko esi sicelo silungelelaniswa ngokuzenzekelayo nesixhobo sakho esiphathwayo.
Kwimeko apho ufumana imiyalezo emitsha, icandelo leencoko Iya kubonisa ukungena komyalezo omtsha okanye ukusilela ukuba sinemiyalezo engafundwanga.
Ukusuka kwisicelo se-Instagram sePC:
Khangela i-Instagram application kwi "Ivenkile yeWindows Qinisekisa ukuba sisicelo sokuqala.
Xa unesicelo sokuqala, khuphela kwaye uyifake ngokuchanekileyo kwi-PC yakho.
Faka usetyenziso ngokucinezela ifayile ye into "Ngena".
Isicelo siya kukubuza Igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha yeakhawunti yakho kwi-Instagram esele ibhalisiwe egameni lakho.
Kwindawo ephezulu yesikrini uya kuba nenketho "imiyalezo ethe ngqo" Cofa kule nto. Iyafana kakhulu naleyo unayo kwisicelo esikhutshelwe kwifowuni yakho ephathekayo.
Esi sicelo siza kukubuza uthotho lwezigunyaziso, phakathi kwayo kukuvumela ukufikelela kwikhamera yakho.
Olu khetho awudingi ukuyamkela, kodwa kufuneka uthathele ingqalelo ukuba, ukuba uyayala, awuzukwazi ukusebenzisa ikhamera yakho ngelinye ixesha, kuba uya kukubuza Ngeli xesha, ke le mvume kufuneka uyiqwalasele ukuba uyafuna ukuyamkela okanye ukuyala, kuba le nkqubo ayizukukunika ithuba lesibini.
Amaxesha alandelayo ufaka imiyalezo ye Instagram Ukusuka kwisicelo oku kuya kukunika ukufikelela ngqo kubo, kuba sele ugqibile ukunika okanye ukukhanyela ugunyaziso kwinkqubo.
Nje ukuba ibekwe kwicandelo lemiyalezo, iya kubonisa yonke imiyalezo ngendlela efanayo naleyo inombolo kanomyayi, Kwaye uya kuba nakho ukuphinda uqalise nayiphi na incoko onayo.
1 Ezinye iindlela:
2 Inketho ye-Intanethi ye-Instagram DM:
3 Ukusuka kwisicelo se-Instagram sePC:
Uyibiza njani i-twitter?
Ungamvimba njani umntu kwiTelegram?